Filtrer les éléments par date : lundi, 21 octobre 2019
lundi, 21 octobre 2019 23:13
Fafa Mahaleo: Hatao eny Ilafy ny alarobia 23 oktobra ny fandevenana azy
Hisy ny fanomezam-boninahitra farany an-dRajaonarison Famantanantsoa na Fafa Mahaleo ; izany dia hatao ao amin’ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny alarobia 23 oktobra 2019. Hifamotoana eny an-toerana ny artista amin’ny 8 ora sy sasany maraina, raha ny fandaminan’ny OMDA (Office Malagasy du Droit d'Auteur). Amin'ny 10 ora no ho tonga ao an-toerana ny nofomangatsikan'i Fafa
Ho entina eny amin'ny FJKM Faravohitra ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, aorian’izay, io andron’ny alarobia io ihany, dia hiazo an’i Rangaina-Ilafy Antananarivo Avaradrano hanatanterahana ny fandevenana.
Nodimandry omaly alahady 20 oktobra 2019, teo amin’ny faha-65 taona i Fafa rehefa nialana nenina notsaboina tao amin’ny HJRA Ampefiloha Antananarivo.
lundi, 21 octobre 2019 23:06
Ampanihy Andrefana: Mitaky ny hanakatonana ny fiangonana "Sarôna Fiandrasan`Ondry" ny vahoaka
Vahoaka maro no indray nidina an-dalambe, sady nilanja sorabaventy androany alatsinainy 21 oktobra 2019, teto Ampanihy Andrefana, mitaky tsy misy fepetra ny hanakatonana ny fiangonana "Sarôna Fiandrasan`Ondry" (É.S.F.O.M), izay Fiangonana vao niforona eto Madagasikara.
Tsy fanajana ny zon' olombelona miaro fanararaotana ara-nofo ataon’ny pasitera ao amin’ny fiangonana no anton’izao fitakiana ny fanakatonana, eny ny fandravana mihitsy aza, ity fiangonana ity izao, hoy ireo nitondra teny, entin-katezerana manoloana ny zava-mitranga ka anairan’izy ireo ny manampahefana handray andraikitra haingana.
lundi, 21 octobre 2019 23:00
« Jeux de Melaky »: Ambatomainty no hampiantrano ny andiany faha-32
Nifarana omaly alahady 20 oktobra 2019 teto Morafenobe ny lalao « Jeux de Melaky » andiany faha-31, nisian’ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy fifanakalozana ara-kolontsaina.
Nanamaloka an’ity andiany faha-31 ity ny ady nifanaovan’ny sivily mpilalao, solontena avy any amin’ny Distrikan’Ambatomainty, sy miaramila avy amin’ny ZRPS Charlie nitranga tao anaty toeram-pisotroana iray tao Antsakoamahavelona ny harivan’ny sabotsy 19 oktobra 2019, tokony ho tamin’ny 5ora.
Niantso namana ilay miaramila taorian'izay. Nisy dimy lahy mitam-basy tonga tamin’ny fiara 4x4, notarihin’ny manamboninahitra iray avy ao amin’ny ZRPS Charlie, naka tamin-kery an’ireo mpilalao avy any Ambatomainty, nitoby tao amin’ny CEG Morafenobe. Niharan’ny vono sy teny mandratra samihafa ireo mpilalao teny an-dalana nitondran'ireo miaramila azy ireo niazo ny tobiny.
lundi, 21 octobre 2019 22:43
Ambohitrimanjaka: Nifampiresaka sy nihaino ny feon’ny vahoaka ireo Senatera
Nanatanteraka fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka, androany alatsinainy 21 oktobra 2019, ireo Loholon’i Madagasikara avy amin’ny Faritanin’Antananarivo izay nahitana ny Loholona Ramalason Olga, Ramahavalisoa Hanitra, Rakotoarisoa Bakolinirainy, Rakotozafy Martin, Randriamalalarison Xavier, Ramparison Luc ary Randriamanatsoa Jafetra izay Loholona avy amin’iny Faritra iny.
Nijery sy namantatra izay tena zava-misy marina izy ireo, amin’ny maha mpiahy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona, ary koa nifampiresaka sy nihaino ny feon’ny vahoakan’Ambohitrimanjaka.
lundi, 21 octobre 2019 22:29
Vono olona tao Amborompotsy: Zandary fito lahy nampidirina am-ponja vonjimaika
Natolotra ny Fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, androany alatsinainy 21 oktobra 2019, ireo zandary fito lahy, voarohirohy tamina vono olona narahina herisetra, fanapahan-doha sy fitifirana tamin’ny basy, nitranga tany amin’ny Kaominina Amborompotsy, Distrikan’Ambatofinandrahana tamin’ny volana oktobra 2018, izay nahafatesana olona efatra.
Nilatsaka ny didy savaranonando taorian’ny fihainoana azy ireo, ka tazomina amponja vonjimaika ao Tsiafahy ny efatra, ary eny amin’ny fonjan’Antanimora ny telo.
Ao anatin'ny fanadiovana sy fametrahana ny asa matihanina eo anivon'ny Zandarimaria, no nanomezan'ny Jeneraly Richard Ravalomanana, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, alalana ampanenjika ireto Zandary ireto.
lundi, 21 octobre 2019 20:31
Maintirano: Miakatra an-tampontanàna ny dahalo
Mandry an-driran’antsy ny mponina eto Maintirano amin’ny tsy fandriampahalemana. Maro no efa lasibatra tamin’ireo tanàna manodidina toy ny nanjo ny mpivarotra enta-madinika iray tao Andrafia Kaominina Andrea, nitranga tamin’ny talata 08 oktobra teo. Tato ho ato dia miakatra eto an-drenivohitry ny Faritra Melaky ireo dahalo.
Tonga omaly alahady 20 oktobra 2019, eto Maintirano ny andia-miaramila avy amin’ny Rezimanta faha-2 ny Faritany Miaramila faha-4 (2/RM4) Mahajanga ka manantena ny mponina fa hiverina amin’ny laoniny ny fandriampahalemana aty Melaky.
lundi, 21 octobre 2019 20:03
Pr Rasoazananera Marie Monique: Voafidy ho mambra ny biraon’ny « Réseau francophone des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la recherche »
Notanterahina tao amin’ny « Maison du Maroc » ao amin’ny « Cité internationale universitaire » ao Paris renivohitr’i Frantsa ny 17 oktobra teo ny fivoriamben’ny « Réseau francophone des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la recherche (RESUFF) », fihaonana nandinihana ny toeran’ny vehivavy eo amin’ny fampianarana ambony, indrindra amin’ireo firenena mampiasa amin’ny ampahany na manontolo ny teny frantsay, sady nanavaozana ny biraon’ny fikambanana.
Mpizaika 90 avy amin’ny firenena frankôna 10 no nandray anjara. Voafidy ho mpitam-bola mpanampy ao amin’ny biraon’ny RESUFF i Pr Marie Monique Rasoazananera, minisitry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa teo aloha, efa filohan’ny oniversiten’i Fianarantsoa, ary solombavambahoaka voafidy ao Ambositra ankehitriny.
Pr Leila Saadé, avy ao amin’ny oniversiten’i Liban no voafidy ho filohan’ity fikambanana ity.
lundi, 21 octobre 2019 19:45
Bakalôrea: Miisa 97 136 ireo mpiadina afaka hiatrika ny fihodinana faharoa manokana
Hotanterahina ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 ny fanadinana bakalorea fihodinana faharoa manokana. « Efa lasa any amin’ireo ivon-toeram-panadinana manerana ny Nosy ireo laza adina, arahin’ireo mpiambina eny anivon’ireo Zandarimariam-pirenena », araka ny fampitam-baovao nataon’ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana aran-tsiansa.
97 136 ireo mpiadina afaka hiatrika io fiodinana faharoa manokana io. Manana safidy anefa ireo mpiadina na hiatrika na tsia izany fanadinana izany.
Tsy hisy intsony ny taratasy fiantsoana na ny convocation. Tsy hiova ny ivon-toeram-panadinana, tsy hiova ihany koa ny efitranom-panadinana. Manantona avy hatrany ny « Office du baccalauréat » ireo izay manana olana amin’ny taratasy fiantsoana.
lundi, 21 octobre 2019 19:34
Fianarantsoa: Kamiao nitaona fasika namono olona efatra
Nitranga lozam-pifamoivoizana nahatsiravina io tolakandro io teo amin'ny fidinana Isaha, raha avy any Anjoma eto Fianarantsoa. Kamiao nitondra fasika no nilaozan’ny hisatra teny am-pidinanana avy any Anjoma hiazo an'Isaha, ka dia nifaoka izay rehetra teny anoloany izay vao nivadika.
Nahafatesana olona efatra ary naharatrana olona fito, ka ny iray amin'ireo no tena ahiana mafy.